Mommra mma yɛnsan nkɔ Yehowa nkyɛn (1-3)
Ɔdɔ a enni huammɔ a ɔman no wɔ no, ankyɛ (4-6)
Ɔdɔ a enni huammɔ ye sen afɔrebɔ (6)
Ɔman no yɛɛ nneɛma a ɛyɛ aniwu (7-11)
6 “Mommra, momma yɛnsan nkɔ Yehowa nkyɛn,Efisɛ watetew yɛn mu de,+ nanso ɔbɛsa yɛn yare. Wapirapira yɛn, nanso ɔbɛkyekyere yɛn akuru. 2 Nnanu akyi, ɔbɛma yɛanya nkwa. Na da a ɛto so abiɛsa no, ɔbɛma yɛn so,Na yɛbɛtena ase wɔ n’anim. 3 Yebehu Yehowa, yɛbɛhwehwɛ no denneennen ahu no. Sɛnea adekyee nni huammɔ no, saa ara na obefi adi;Ɔbɛba yɛn nkyɛn te sɛ osu a ɛretɔ denneennen,Te sɛ fefɛw bere mu osu* a ɛfɔw asaase.” 4 “Efraim, dɛn na menyɛ wo? Yuda, dɛn na menyɛ wo? Efisɛ mo dɔ a enni huammɔ te sɛ anɔpa mununkum,Ɛte sɛ obosu a ɛyera ntɛm. 5 Enti mɛma adiyifo no atwa wɔn agu;+Mede m’anom asɛm bekum wɔn.+ Na atemmu a ɛbɛba wo so no bɛhyerɛn te sɛ kanea.+ 6 Ɔdɔ a enni huammɔ na mepɛ, na ɛnyɛ afɔrebɔ;Onyankopɔn ho nimdeɛ na mepɛ, na ɛnyɛ ɔhyew afɔre.+ 7 Nanso wɔabu apam no so te sɛ onipa dasani,+ Na ɛhɔ na wɔayi me ama. 8 Gilead yɛ abɔnefo kurow;+Mogya ayɛ kurow no ma.*+ 9 Asɔfokuw no te sɛ akorɔmfo werɛmfo dɔm a wɔtetɛw nnipa. Wokum nnipa wɔ Sekem kwan so,+Na wɔn suban yɛ aniwu. 10 Mahu biribi wɔ Israel fi ama me ho adwiriw me. Ɛhɔ na Efraim bɔ aguaman.+ Israel agu ne ho fĩ.+ 11 Na wo, O Yuda, wo de, wɔayi twabere bi asi hɔ ama wo.Saa bere no, me manfo a wɔakyere wɔn kɔ no, mɛboaboa wɔn ano asan aba.”+
^ Anaa “Mogya anammɔn ayɛ mu ma.”